Madaxweyne Donald Trump Oo Qeeylo Dhaan U Dirsaday Dalalka Yurub | Sanaagmedia — Warar Sugan
Madaxweyne Donald Trump Oo Qeeylo Dhaan U Dirsaday Dalalka Yurub
February 18, 2019 - Written by admin
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa UK iyo waddamada kale ee Yurub ee xidhiidhka kala dhaxeeyo u sheegay in dib ay ugu soo laabtaan dagaalka lagula jiro kooxda isku magacaawday Khilaafada Islaamka.
Trump ayaa waddamadaan ku booriyay in ay ka qeeyb qaataan dagaalkii ugu dambeeyay oo ay isku dayaan in ay meesha ka saaraan in kabadan 800 oo qof oo ka tirsan dagaalamyaasha ururka Daacish.
Hadalkaan oo uu ku soo qoray bartiisa twitter-ka ayaa imanaya iyadoo xoogagga Kurdiyiinta ee uu taageero Mareykanka ay weerar culus ku qaadeen goobtii ugu dambeeysay ee ay IS ka arrimiso taas oo ku taallo soohdinta Suuriya ay Ciraaq la wadaagto.
Waxaana jiro dagaalamayaal ka tirsan IS ay gacanta ku dhigeen ciidamada ay Kurdiyiinta hor kacayaan.
Mr Trump ayaa maalmo ka hor sheegay in ururka Daacish ay haatan sii dhamaanayaan.
Hadalkiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in Mareykanka uusan eegan Karin dagaalamayaasha IS oo ku dhex milmaya Yurub.
Waxa uuna sidoo kale sheegay in la joogo xilligii dalalka kale shaqadooda ay awoodaan qabsan lahaayeen.
Saraakiisha Maamulka Trump ayaa maalintii Axadda ahayd u sheegay wargeeyska Telegraph in ay ka cabsi qabaan in qaar ka mid ah dagaalamayaasha Daacish ee maxaabiista ah ay dalalka Yurub khal-khal geliyaan waa haddii aan cadaaladda la hor keenin